Claudia, heroine ye-wefilim, njenge ezininzi eliphakathi-iphelelwe abafazi, hayi ingaba personal ubomi. Kwaye ke enye dreary ngokuhlwa, yena enze isigqibo ubeke phezulu ad: Lonely umfazi ifuna ukuya kuhlangana nani. Ngoko ke ngu – elimfiliba emntwini gama i-valentine, owayesakuba circus performer, survivor ka-physical kwaye mental trauma kwaye kwi end yehla. I-attitude ka-Claudius kwiintlanganiso kuye kakhulu contradictory. Yena sele ukuthatha a kunzima kwaye kubalulekile isigqibo molo. Bona iphepha wefilim “Lonely umfazi ifuna ukuya kuhlangana nani. ” Dating site akusebenzi-store kwi-database i-imeyili idilesi na le window, kwaye ezingayi ukusebenzisa kwabo kuba na unauthorized ngeenjongo, Wefilim ayikho omtsha, kwaye ingaba & ncamathiselamessage status ke amaxesha aliqela. Ke kwelinye iliso bakubona. Andiqondi ukuba uvuthiwe, kodwa wefilim waphula ngaphandle kum into zayo zonke indlela slesinski. Yangaphakathi i-heroine ngu ukudinwa yokuba kuphela, kodwa convinces ngokwakhe kwaye abanye ukuba yena ngu nomdla umfazi, yena akuthethi ukuba kufuneka anybody, kwaye zonke emangalisayo. Kuphela xa oku ilizwi okunqanda kwi tears. Kodwa xa oko iza umgqatswa kuba usindiso (Zbruev), yena ikuqonda ukuba ayinjalo ntoni yena ilindele. Kwaye ngubani yena ilindele. Yena herself abaqondanga ngoku. Clash kunye inyaniso xa yayo ubomi iza a stranger. Kodwa ke crushes kwaye wangaphandle uluvo lwakhe. Kwaye yena iifayile inika. La alahle ibonisa kakuhle kakhulu, kakhulu believable. Ke yena okunqanda phantsi kwaye ithi yena iimfuno care, hayi ukuba yena nasengozini (icandelo lomboniso xa umntu weza kuye. Kodwa xa oko kuza yakhe ex-umfazi, ngeli incoko, litshintsha yonke into. Yena ufuna ukubuyela umntu. Kwatshintsha yayo. Mhlawumbi yena ndabona akanguye ukuba bargain. Bafika ekhaya kwaye wavula ucango, njengoko ukuba ngokumema kuye. Ukuba ngomhla wokuqala umsebenzi yi-constantly kwi edge, isigaba sentetha njengokuba entlakohlaza, kwangoko emva climax iyagqitha pha ngokukhululekileyo, njengoko zonke kugqitywe iziqu zabo. Ngoko ke, ukuba umntu akakwazi guessed, melody circus hero Alexander Zbruev lwenziwa, xa ixesha weza zibalisa malunga ngokwabo. Ke funny, kodwa yintoni ndikhumbula kakhulu ukususela wonke umboniso. Kwaye ngoko okwesibini. Kanye elidlulileyo kuthatha indawo, akunjalo cling ngesizathu esithile.
Zbruev okulungileyo akukho ukuthandabuza elikhulu talent, kodwa kwaba kakhulu hero lowo ngu-useless. Kwakhona ukuba ikhusele yintoni uyayazi unetyala e best of condescension uza kufumana akukho ithuba kuba into ngakumbi substantial. Ewe, kwaye I. Kupchenko into kakhulu buthathaka jonga. Nako ukuqonda, nokuba ngaba wakhe indima ke abusive, nokuba isakhelo waba ifomu. Hayi ngathi kum. Andikho iphenjelelwe. Vanity zonke iindidi, uyazi. Oko hangs phezulu ads, ngoko ke rips. Ngoko ke apho. , sifuna iti. Mna musa ngathi. Hefty smacks zam endizithandayo. Baya andazi yintoni abazithandayo. Seriously. Kwaye iphela, ingakumbi vula na ixesha. Fantasize, oko kukuthi, musa ufuna. Ingxaki, kunjalo, kubonisiwe apha ngaphandle umbuzo, kodwa kuphela into ekunokukhethwa kuzo. Obungunaphakade thetha kwesi sihloko, ebeya kuba ndonwabe hayi ukuba basele, kodwa akukho yokuphepha. Lonesome njengoko esihogweni, akukho namnye ikuqonda, kwaye yonke lonto. Ophunyezwe. Kukho nkqu classic. Musa bakholelwa kuyo. akuyomfuneko apha kakhulu ngakumbi. Kwaye musa ufuna ukuva. ezilungele. Ngenxa akuvumelekanga yoqobo. Ukuba balibeke mildly, Asiyiyo entsha. A loomama umntu. Mna awuwazi. Apha ngamazwi kutheni kum. kwaye, bathi, kutheni kum ngoko ke young, beautiful kwaye ngoko ke kuyimfuneko ukuba mna unako ukuyiqonda. Ngoba, ngenene, bonke abadala, kwaye ukuqonda, pity, mamela akukho okulungileyo. Kuba akukho recoil. I-one-sided umdlalo. Ikhangela akululanga ngenxa yakho okruqukileyo okanye kukho nto ukwenza, ufuna caress, intuthuzelo commercials kusenokuba ngumsebenzi dog ukuqala okanye phaya, uthi, amkele encinci abo ukuze ukukhula, ngoko ke, ukuthetha, izifakelelo waba. Ke ngoko, ngokupheleleyo efanelekileyo ezinjalo iingxaki. Kodwa omnye kubo hayi limited. Ukususela opposite flank begin ukuba ngamandla kwi iingcinga a ezahlukeneyo zalo lonke udidi. Bathi, Ewe yayo ngcono inferior. Mvumeleni kwi couch isisu phezulu, kodwa vala. Kulungile, njalo-njalo. Kubalulekile, kunjalo, nantoni na unako kunokwenzeka, kodwa ndicinga ukuba kwixesha elide qhuba, ubudlelwane ngu doomed. Kwakhona, ngenxa obvious bias. Kulungile, Uthixo kumsikelela, ndicinga. Wonke umntu ukuphenjelelwa iziqu zabo. Ngoku qinisekisa ukuba kufuneka yaba singena kuqala uhlobo, kwaye ingabi kunye okwesibini, kwaye swings. Apha naphaya. Isikhewu, Bob. Jones. Ngaphandle kwam. Ezinjalo considerations phakama apha. Ngoko ke kanjalo E. Nightingale uphawu waba kakhulu amahlwempu Kassian, kodwa ke, zonke ke kwakhona. Fact akuthethi ukuba tshintsha, imozulu ingaba. Ke ngoko, ngenxa ngasentla, sinako qinisekisa ukuba ifilim sele ivuliwe i-fan. Made, ngoko ke, ukuthetha, ngokusekelwe ukuqonda ababukeli bomdlalo bangene. Mna enjalo musa cinga, ke ngoko, ubeke Loluntu malunga kwaye Dating zephondo, echoes ye-Soviet elidlulileyo balaseleyo, imifanekiso a Lonely umfazi ifuna ukuba badibane nabo. Ngonyaka, ukuba inkumbulo usebenza, mna ke iminyaka kid, kwaye kuphela ngoku, kwakulo nyaka kwabakho akukho Internet kwaye mobile izixhobo evumela ukuba ufuna ukuthumela kwaye bafumana imiyalezo. Kwaye abantu baba endala-fashioned endala-fashioned ndlela: abantu abaqhelekileyo kwi umdaniso floors, amathala eencwadi, theatres. Kodwa kwakukho iimeko ezifana kwi-wefilim Vyacheslav kwi: ngu-Victor Merezhko, wanika announcements kwi-newspaper abo, kwaye abo ukuya kwezi kwi iipali. Zisasaza elimfiliba zehlela heroine ye-wefilim. Uthatha isigqibo iziqu zabo, Klavdia (Irina Kupchenko), waits kwaye hopes, zinika ngolo ukubhengezwa, ukubona nabani na kodwa omnye othe kuza. Kuba uqinisekile yena zange waits kuba Alain Delon kwaye Montgomery Clift, kodwa emva weighing i-pros kwaye cons, kulungile ngu-hayi intombi endala, defunct, kwaye uzole nto. Kwaye ke kuya kuba kokuya kwi ezahlukeneyo iimpawu, oko akunjalo balwe, kodwa Union ezimbini sithande ukuba dive akukho hurry. Kwaye kukho iimposiso inkcazo: yena ufuna kumenza umntu kwaye yena u-ezingayi tshintsha. Iinkokeli musa ufuna lower iindidi awunakuba. Corny. Kwaye kwangoko. Kusoloko kwenzeka xa abantu, akukho mcimbi yintoni ngokwesini kunjalo, musa ndiyawazi nabanye abantu, enjalo njengoko zinjalo, nabo bonke vices, anxieties kwaye ezinzulu. Zethu imagination yenza kunye nathi a cruel joke ukuba kufuneka ngamanye amaxesha ukuhlawula eliphezulu kwexabiso. Kodwa credit ye-heroine Irina Kupchenko, yena ubuncinane yenza i-azama ukuqonda hero Alexander zbrueva. Ukuqonda kwaye yamkela. Kwaye oku yangaphakathi umzabalazo wenkululeko, kuya kubakho ngonaphakade njengoko ixesha elide njengoko oluntu ugqatso ikhona. Njengokuba ubungqina wakhe mazwi, wathi girlfriend yakhe kwi-car, kwaye swings yakhe loomama isimo kwaye imeko. Kodwa into sebenza: umntu ngaphandle ethile yokuhlala, pursuance ka-Alexander zbrueva, ubani uluvo mna-kukunceda kakhulu. A paradox, kodwa kunjalo. Kwaye azinako sukuyihoya. A ezinzima lwezentlalo-imeyl, mhlawumbi kwalomgaqo-siseko kwinkqubo yayo qho ngonyaka. Lowo izoba isifundo ukususela kweli wefilim, mhlawumbi fumana usapho ulonwabo. Loneliness = embi kangako nto, ingakumbi xa kubonakala elide abafazi kuphela: akukho usapho, umyeni nabantwana. Okwesibini, ingakumbi keenly waziva nokungabikho uthando nosapho xa umfazi uba kunoko kunoko Loneliness kwi old age ngu cruel nto kwaye akukho unako kuba akukho iinkosana. Kwaba ngeli xesha ingakumbi ufuna uxolo kwi-icimile intente, abantwana kwaye umyeni. Ngenxa usapho hearth umfazi ilungile kuba nantoni na, nkqu uninzi unpredictable, rash kwaye desperate izinto. Ngenxa yokuba umfazi wadala usapho hearth. Kule ke ubona injongo yayo kwaye lithetha ngendlela ubomi babo. Banqwenela ukuba umntu waba kufutshane, kwaye ngamanye amaxesha nje abanye, kwakukho omnye umntu ukuba care, ndiyakuthanda kubakho emva kwakhe njengoko ngasemva a ilitye eludongeni. Kulungile, kunye enjalo mentality zethu Russian abafazi. Oko kukholisa kwenzeka okokuba adulthood akasoze abe choosers, kwaye ixesha nomonde kule nokukhupha suitors ihlala ezimbalwa Kwaye oku kungenxa yokokuba kuzo zonke ulutsha ukuhamba, wonwabe, hayi yokucinga usapho, ukwakha grandiose izicwangciso befuna a Prince kwi-mhlophe horse, ukukhangela i career nosapho ubomi azidingi. Kwaye ke ngesiquphe, iingqondo zabo ukusuka youthful delusions kwaye amaphupha, uqale ku-jonga ubomi realistically, kodwa kakhulu emva kwexesha. Kodwa bonke, ngokukhawuleza okanye emva koko kuza ixesha elide-awaited Uthando. Hayi abo asingawo abafanelekileyo Luthando kwaye le filim ngomhla wokuqala asikwazanga njenge ngamnye, ezinye kwaye ke wehla ngothando kwaye ukuqonda. Kuba akuvumelekanga kwimbonakalo ishishini. Phantsi imbonakalo & ngokupheleleyo ezahlukeneyo engabonakaliyo Abantu ikholisa vula iselwa ngesiquphe, kwaye phantsi iimeko ezahlukeneyo, njengoko kule wefilim, njenge fairyname ibali Ngoku okanye Princess kwaye swineherd yi-Hans Christian Andersen Uthando corrects: yenza i-alcoholic kwaye isidleleleli umthetho-abiding kwaye esinenkathalo ubawo kwaye umyeni yabonisa ukuba le filim.
I-wefilim ngu esifutshane njenge humor, sarcasm, kodwa ngokucacileyo kwenzakalisa topical loluntu imiba Filmed ngoko ke ekuthatheni inyaniso, believable, relatable umntu, isirussian. Ngamanye amaxesha kuba akukho unye abo baya kuba yakhe elizayo umyeni, umfazi ka-ngukumkani okanye i-alcoholic, laundress okanye Princess kwaye ngamanye amaxesha ngumsebenzi wefilim ke Heroine Claudia sesinye abo abafazi abo ikhangeleka kuba intuthuzelo, struggling kunye loneliness, ezama ukuqonda, usapho cosiness. Xa umfazi yena uthanda sizakwenza nantoni na kuba uthando kwaye kuba umntu yena wamthanda. Uthando kukuba zange kakhulu emva kwexesha ukuba jonga Loneliness, misunderstanding, babuza ukuba ube kunye umntu tortured kwaye burdened abantu. Wonke umntu copes kunye ezi ngxaki njengoko eyona unako: ukufunda, ekubeni fun, besela Umntu a loluntu ekubeni. Sonke ufuna sithande kwaye affection. Loneliness kufuneka ahlangane kwaye kuba elilandelayo ukuze Siphile kanye, kwaye ubomi bethu kuphela awuchanekanga. Ukongeza, society ifuna ukuba ube watshata-watshata, kunye iqelana ye abantwana. Oku, imbono yakhe, ulonwabo kwaye ixabiso womntu, ngenxa yokuba valued usapho nkqu Nangona ngamanye amaxesha iintsapho kokuya kwi Uthixo uyayazi into. Xa ndonwabe, wafumanisa yakhe omnye kwi-million, ngoko ke akukho mcimbi yimalini imali lowo wenze ntoni inkangeleko kunye namaqonga isimo nisolko ndonwabe naye kwaye ke oko. Oko nje ngoko kwenzeka okokuba oku oku wefilim waba iingcaphephe engabonakaliyo kwi ngokubanzi ngokwesiqu abantu. Mhlawumbi ngenxa yokuba yena ke ezimbalwa decades ozayo yakhe ixesha. Kwi-mid -yamashumi amabini ingxaki ka-loneliness abantu waba nangakumbi acute, kodwa akazange wear enjalo enkulu umlinganiselo njengoko namhlanje. Heroic Claudia ngu dictated ngaphezulu nge-uxinzelelo kuluntu, kunokuba elungileyo iya nengqiqo. Wayengomnye constantly crushes watshata, umhlobo, ngaphaya koko, intsholongwane ebangela yakhe inferiority intsonkothile. Ngexesha umsebenzi yabasebenzi ukuxoxa yakhe personal ubomi, okanye ngenye nokungabikho kuyo. Kwaye ke kukho i-ummelwane kunye efanayo iingxaki stuffed kwi girlfriends. Society uqhubekeka tyhala kwaye emva putting phezulu ads. Imposiso yorhwebo lwangaphakathi yayo uluvo lwam, hayi inika ugqaliso, ngcono ukuba cinga ukufumana. Ngokomthetho isithethi kakhulu ekuqinisekiseni. Zbruev ezilungileyo rhoqo kwaye kuzo zonke iindima. Yena nkqu uninzi dramatic scenes, icace phandle amazingly ukukhanya isithethi. Nkqu bengenamakhaya kokuba ifumene abanye kakhulu careless kwaye charming. Apha e-I. Kupchenko indima kokukhona nzima. Ukudlala uluvo zeentloni, embarrassment okanye inhibition kwaye ingabi overplay, ngaphandle kobuso a nzima umsebenzi, kodwa yena coped ngayo brilliantly
← Incoko Roulette - dating nge-girls ukusuka zonke phezu kwehlabathi
Incoko Roulette-Intanethi Ividiyo incoko Free nge-Girls →